Vivo ရဲ့ APEX 2020 concept ဖုန်းကိုလာမယ့် MWC မှာပြသနိုင် | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Vivo ရဲ့ APEX 2020 concept ဖုန်းကိုလာမယ့် MWC မှာပြသနိုင်
Vivo ရဲ့ APEX 2020 concept ဖုန်းကိုလာမယ့် MWC မှာပြသနိုင်
တရုတ် စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ vivo အနေနဲ့ APEX 2020 concept ဖုန်းကို ထုတ်ပြဖို့ ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ သတင်းတွေအရ လာမယ့်လမှာ ကျင်းပမယ့် Mobile World Congress မှာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့် ဖုန်းသစ်ကိုမိတ်ဆက်လာမယ့်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ “Empower the Next”. ဆိုပြီး မီဒီယာတွေကို ဖိတ်စာတွေ ဝေထားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Vivo ကမိတ်ဆက်တဲ့ APEX concepts တွေဟာ အထင်ကြီးစရာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အမြဲယူဆောင်လာလေ့ ရှိပါတယ်။ 2018 ကပထမဆုံးပြခဲ့တဲ့ APEX concept ဆိုရင် bezel-less ဖုန်းဖြစ်ပြီး first in-display fingerprint scanner ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ APEX 2019 မှာတော့ fingerprint scanner ပါပြီး display မှာအပေါက်တွေ မပါတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် 2020 ထွက်လာမယ့်ဟာမှာ ဒီထက်ပိုဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာတွေ မြင်တွေ့ရမှာပါ။
Vivo ရဲ႕ APEX 2020 concept ဖုန္းကိုလာမယ့္ MWC မွာျပသႏိုင္
တ႐ုတ္ စမတ္ဖုန္းထုတ္လုပ္သူ vivo အေနနဲ႔ APEX 2020 concept ဖုန္းကို ထုတ္ျပဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ သတင္းေတြအရ လာမယ့္လမွာ က်င္းပမယ့္ Mobile World Congress မွာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဖုန္းသစ္ကိုမိတ္ဆက္လာမယ့္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ကေတာ့ “Empower the Next”. ဆိုၿပီး မီဒီယာေတြကို ဖိတ္စာေတြ ေဝထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
Vivo ကမိတ္ဆက္တဲ့ APEX concepts ေတြဟာ အထင္ႀကီးစရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အၿမဲယူေဆာင္လာေလ့ ရွိပါတယ္။ 2018 ကပထမဆုံးျပခဲ့တဲ့ APEX concept ဆိုရင္ bezel-less ဖုန္းျဖစ္ၿပီး first in-display fingerprint scanner ထည့္ေပးထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က မိတ္ဆက္ခဲ့တဲ့ APEX 2019 မွာေတာ့ fingerprint scanner ပါၿပီး display မွာအေပါက္ေတြ မပါေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ 2020 ထြက္လာမယ့္ဟာမွာ ဒီထက္ပိုဆန္းသစ္တဲ့ နည္းပညာေတြ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။
Previous article120HZ SCREEN နဲ့ဖုန်းတွေ ထုတ်ဖို့အဆင့်သင့်ဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့ ONEPLUS
Next articleSamsung Galaxy S20 စီးရီးမော်ဒယ်အားလုံးတွင် 12GB RAM သုံးလာမည်